Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Milamina ve ny fizahan-tany ara-pahasalamana? » Page 3
Vaovao Mafana • Kolontsaina • Editorial • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Mametra ny fitomboana:
Ny famerenam-bola maharitra amin'ny alàlan'ny mpandoa vola sy ny fahasarotana mifandraika amin'ny dia lavitra, ny sakana amin'ny fiteny, ny fisian'ny antontan-taratasy ary ny olan'ny fanekena VISA dia manakana ny fitomboan'ny fizahan-tany ara-pitsaboana.
Ny areti-mandringana Covid 19 sy ny fiatraikany amin'ny toekarena manerantany dia nanelingelina ny indostria miteraka fisalasalana amin'ny fangatahana vokatra manokana sy voafetra ny fisian'ny fampiharana ara-pitsaboana sy indostrialy.
Ireo firenena voa mafy tamin'ny Covid 19 dia misy an'i India, ary i Sina. Ho fanampin'izany, ny fameperana ny dia sy ny fampiatoana ny fitaterana ny sisin-tany dia nijanona ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena, izay nisy fiatraikany ratsy tamin'ny fitomboan'ny fizahan-tany ara-pitsaboana.
Fantaro Alohan'ny handehananao:
Ny marary dia afaka mamonjy amin'ny 30-80 isanjaton'ny totalin'ny fitsaboana amin'ny fandaozana an'i Etazonia. Ny vidiny ambany sy ny fahazoana mora ny asa no antony voalohany manosika ny olona liana amin'ny toerana fizahan-tany ara-pitsaboana.
Ho an'ireo mpizaha tany liana amin'ny fizahantany fizahan-tany ara-pahasalamana, ny ezaka fikarohana feno sy feno dia tokony hahitana ny fari-pahaizana sy / na ny fahaizana efa voamarina avy amin'ny mpamatsy sy ny fotodrafitrasa. Fikambanana roa (eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena) manolotra fahitana momba ny fanabeazana, ny fahaiza-manao, ny fahalalana ary ny mombamomba ny fotodrafitrasa sy ny mpampiofana ao anatin'izany ny Joint Commission International (heverina fa fenitra volamena ho an'ny fahazoan-dàlana iraisam-pirenena). Ny tombo-kasen'izy ireo dia heverina ho famantarana iraisampirenena fa hopitaly miasa amin'ny fenitra ambony indrindra. Ny Organisation international pour la standardisation (ISO) dia misy firenena 100 eo ho eo ary ISO90000.2001 dia natao ho fitaovana fitantanana hahatratrarana ny fifehezana sy ny tsy fitoviana amin'ny lafiny asa rehetra, manomboka amin'ny lafiny teknika ka hatramin'ny fitantanana.
Ho an'ireo olona mieritreritra mpitsabo mpitsabo amin'ny fizahantany dia manoro hevitra ny fitsidihan'ny manam-pahaizana manokana momba ny fitsaboana any Etazonia iray volana, fara fahakeliny, alohan'ny fiaingany mba hahazoana antoka fa voafehy tsara ny toe-pahasalamany, manana fanafody sahaza ary mahazo vaksiny mety. Ny mpizahatany mpitsabo dia asaina manamarina ihany koa ny fahaizan'ny olona manome ny fikarakarany sy ny mari-pahaizana momba ilay toerana hitsaboana azy ireo. Zava-dehibe ny fahafantarana ny zava-misy fa ny fenitra ivelany ho an'ny mpitsabo sy toeram-pitsaboana dia mety tsy mitovy amin'ny an'ny Etazonia, ary mety hitera-doza ny fomba rehetra.
Ireo firenena mpampiantrano matetika dia tsy manana na tsy manery ny fampiharana ny lalànan'ny fanitsakitsahana, ka miteraka risika fanampiny. Kely na tsy misy ny fiantohana amin'ny fiantohana amin'ny alàlan'ny fiantohana amin'ny alàlan'ny fiantohana maloto na tsy misy aza mamela ny mpikirakira ny tany an-dàlam-pandrosoana sy ny fotodrafitrasa hitazona ny vidiny mirary fa mamela ireo mpizahatany mpitsabo miaraka amin'ny safidy vitsivitsy raha ahiana hanao ratsy izany. Any Singapour sy Malezia, ny fitsarana manara-maso ny tsy fetezana dia mihemotra amin'ny hevitry ny mpitsabo mpanatrika, izay mitaky ny dokotera mba "hiaiky" amin'ny tsy fanao mba hanomezana onitra onitra.
Mety tsy maninona ireo mpizahatany ara-pitsaboana maro; na izany aza, ny fifantohan'ny firenena mpampiantrano amin'ny mpitsangatsangana mpitsabo vahiny, raha ny marina, ny fandavana ny tombontsoa ho an'ny olom-pirenena mahantra any amin'ireny firenena an-dàlam-pandrosoana ireny sy ny fampiasana serivisy fitsaboana dia heverina ho raharaham-pirenena.
Ny mpitsangatsangana ara-pitsaboana koa dia tokony hiahiahy amin'ny zava-misy fa ny governemanta sy ny fiantohana ara-pitsaboana fototra dia mety tsy handrakotra ny fomba fitsaboana iraisam-pirenena mitaky ny handoavan'ny marary vola. Ankoatr'izay, mety misy fikarakarana kely aorian'ny fandidiana ny vokadratsin'ny voka-dratsy mety hitranga satria ny filana fanarenana dia miova arakaraka ny toetran'ny fomba fanao. Ny tsena sasany dia manolotra fisotroan-dronono amin'ny alàlan'ny mpiasa mpitsabo mpanampy efa 24 ora, fa ny sasany kosa manolotra fotoana fanarenana any amin'ny hotely na mandry amin'ny kilometatra maro miala ny dokotera sy ny marary aorian'ny fandidiana, mampitombo be ny fotoana valin'ny valiny.
Alohan'ny hanaovana fanoloran-tena:
Rehefa voadinika miaraka amin'ny risika ny fiasa, ny tombony ary ny tombony rehetra dia tokony hijery akaiky ny politikany sy ny drafitra fiantohana ara-pahasalamany ankehitriny ireo mpizahatany mpitsabo mety. Ny ankamaroan'ny mpitsangatsangana mankany Thailand, Singapore, Malezia ary India dia efa nandoa vola mialoha amin'ny fitsaboana azy ireo; na izany aza, raha sendra fahasarotana ara-pahasalamana izy ireo na mila manafoana ny dia, raha tsy misy fiantohana fanampiny, dia mety tsy ho afaka ny hamerina ny sarany sy hiaina avo kokoa noho ny vola lany amin'ny fitsaboana antenaina.
Ho an'ireo mpandeha izay efa nandoa vola mialoha ny fitsaboana azy ireo ary te hiaro amin'ny fandaniam-bola be dia be mifandraika amin'ny fahasarotana ara-pahasalamana dia azo atao safidy azo atao izany raha misy tombony amin'ny fiarovana ny fampiasam-bola raha sanatria foanana ilay dia. Mety misy tombony ihany koa ny fahazoana ny rakotra famindrana toerana raha toa ka voatery nafindra hopitaly hafa ilay marary. Mety ilaina koa ny mahazo fiantohana amin'ny tranga tsy misy ifandraisany amin'ny fitsaboana.
Famerenana ny risika
1. Areti-mifindra: iray amin'ireo risika lehibe indrindra dia ny aretina. Ny firenena hafa dia manana fari-pitsaboana tsy mitovy amin'ny fidiovana ary ny toeram-pitsaboana dia mety hiteraka fanamby. Ny areti-mifindra dia mety hitranga na aiza na aiza noho ny antony maro samihafa, anisan'izany ny fomba fidiovana sy ny fotodrafitrasa ary / na ny fitaovana ampiasaina mandritra ny fandidiana dia mety tsy ho maina. Loza lehibe ateraky ny aretina ny otrikaretina bakteria sy virosy. Ny VIH sy ny hépatite avy amin'ny fanjaitra maloto sy ny fitaovana fandidiana dia mety hiteraka olana. Zahao ny fampitaovana rehetra (anatiny sy ivelany) alohan'ny ilana izany.
2. Loza ateraky ny fitsaboana. Tsy voafetra amin'ny firenena iray ny fanafody sandoka; na izany aza, ny kalitao dia mety tsy hitovy amin'ny hopitaly iray mankany amin'ny iray hafa ary amin'ny firenena iray mankany amin'ny iray hafa. Fikarohana ny dokotera sy ny fivarotam-panafody alohan'ny hitetezana any ivelany.
3. Ny sakana amin'ny serasera dia afaka mametraka glitch amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana. Raha tsy miteny ny fitenin'ny firenena mampiantrano anao ny fahaizanao mizara ny olanao amin'ny ekipanao mpitsabo dia mety handefa ireo matihanina any amin'ny làlana diso, na dia misy mpandika teny aza.
4. Ny fampidiran-dra dia mety ilaina mandritra na aorian'ny fitsaboana ka tsy maintsy ilaina ny manana toeram-pitsaboana any ivelany ny fenitra fitiliana avo momba ny fanomezana ra. Miovaova ny fenitra ary mety hampidi-doza ny hépatite na VIH ny mpizahatany mpitsabo.
5. Ny fitsangatsanganana dia mety hiteraka fikorontanana amin'ny drafitra fitsaboana. Ny fivezivezena amin'ny rivotra dia mety hampitombo ny risika amin'ny fivontosan'ny rà. Ho fanampin'izany, ny fitambaran'ny fandidiana sy ny adin-tsaina na ny havizanana aorian'ny sidina zana-potoana maro dia mety hampitombo ny risika.
6. Ny kaodim-pitsaboana aorian'ny fandidiana dia tsy mitovy amin'ny hopitaly sy eo an-toerana ary ny fanaraha-maso mifanaraka amin'izany dia mety ho zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny fomba fanao. Ireo marary izay mandeha mankany ivelany amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana dia mety hahita fiverenana miaraka amin'ny aretina na aretina izay mitaky fitsaboana lafo vidy. Hamarino ary soraty ny fomba fanaraha-maso (sy ny vidiny mifandraika amin'izany) ao amin'ny tobim-pitsaboana.
7. Lalàna sy mpisolovava. Raha misy ny olana amin'ny fandidiana na ny fitsaboana inona avy ireo vahaolana ara-dalàna misy? Mety ho sarotra ny mitady vahaolana ara-dalàna amin'ny raharaham-pitsaranao satria mety tsy manana zon'ny lalàna ianao ary tsy afaka mahazo onitra amin'ny fandidiana tsy mandeha amin'ny laoniny.
8. Ny fenitra azo antoka dia samy hafa be amin'ny hopitaly sy amin'ny hopitaly ary amin'ny toerana eo an-toerana. Hanana fahazoan-dàlana ve ireo matihanina voafantina ary inona ireo pitsopitsony? Zahao ny mari-pahaizana momba ny olona rehetra sy ny toerana rehetra.
9. Mety misy sarany miafina. Ny fizahan-tany ara-pitsaboana dia mety ho toa fomba hafa lafo kokoa - nefa azonao antoka ve izany? Mitaky fifanarahana an-tsoratra miaraka amin'ny tobim-pahasalamana na ny vondrona mikarakara ny dia, mamaritra ny fitsaboana, ny kojakoja, ny fanafody ary ny fikarakarana… voasarona (fa tsy sarona) amin'ny vidiny mifandraika amin'ny dia. Raha takiana ny andro fanampiny amin'ny hopitaly ary / na ilaina ny fitsaboana fanampiny, inona ny vidiny mifandraika amin'ireo toe-javatra ireo?
Ny fizahantany transplantation dia ao anatin'ny fizahan-tany ara-pitsaboana izay mifantoka tanteraka amin'ny fandidiana fandidiana. Miaraka amin'ny tsy fahampian'ny tsy fahampian'ny taova misy any Etazonia, nanjary malaza ny fizahan-tany momba ny famindrana. Amin'izao fotoana izao ny United Network of Organ Sharing (UNOS) dia mitatitra fa mihoatra ny 105,000 ny amerikana ao amin'ny lisitra fiandrasana kandidà amin'ny famindrana olona miaraka amin'ireo marary maherin'ny 15,000 miandry famindrana aty. Ny angona UNOS dia mampiseho ny fihenan'ny fanomezana ary ny isan'ny mpamatsy vola velona dia nihena 1.7 isan-jato ary ny mpamatsy vola maty dia nihena 1.2 isan-jato tamin'ny 2008.
Ny AASLD sy ny International Liver Transplant Society (ILTS) dia manana toerana manohitra ny fanararaotana ataon'ny mpamatsy vola, ny fanarenana taova avy amin'ireo gadra novonoina ary nanameloka ny fampiasana ireo mpamatsy vola velona. Azonao atao ve ny manamarina fa ny taova azonao dia azo tamin'ny fomba etika? Mety mety handray anjara amin'ny fanararaotana ny vahoaka ambany fidiram-bola, ny tanora, ny ankizy na ny voafonja.
Fifandraisana sy firaketana
Alohan'ny handaozanao ny tranonao hanao fitsaboana dia mifandraisa amin'ny dokotera eo an-toerana mba hahafantarany ny alehanao sy ny zavatra ataonao - sao dia mila fanampiana fanaraha-maso ianao rehefa miverina.
Manàna kopia rakitsoratra momba ny fitsaboana izay misy ny laboratoara sy ny fianarana hafa vita mifandraika amin'ny toe-pahasalamanao izay nahazoanao ny fikarakarana sy ny lisitr'ireo allergy anananao. Manomàna kopian'ny takelaka rehetra sy ny lisitry ny fanafody rehetra nalaina, ao anatin'izany ny marika, anarana mahazatra, mpanamboatra ary fatra. Makà kopian'ny fomba fitsaboana rehetra sy ny medaly omena amin'ny fitsaboana anao mba hahafahanao mizara izany amin'ny ekipa mpitsabo any an-trano.
Mety hampidi-doza ny fizahan-tany ara-pitsaboana, noho izany dia zava-dehibe ny fahafantarana ny loza mety hitranga alohan'ny fiaingany.